Kal-fadhiga Golaha Kabineega DDSI Oo Furmay - Cakaara News
Kal-fadhiga Golaha Kabineega DDSI Oo Furmay
Jigjiga(Cakaaranews) isniin, 5ta September 2016. Waxaa subixii hore ee saaka hoolka shirarka ee xafiiska madaxwaynaha kafurmay kalfadhigii caadiga ahaa ee golaha kabineega DDSI oo uu hogaaminayay madaxwayne CMC.
Hadaba kal-fadhigan ayuu madaxwaynuhu ugu horayn usoo bandhigay golaha ajandayaasha lagaga wada hadlayo oo ahaa: sidii loo dardargalin lahaa fulinta qorshayaasha sanadka 2009TI iyadoo xooga lasaarayo dhinacyada xafiisyada horumarinta, iyo sii xoojinta adkaynta nidaamka shaqagalida dhamaan shaqaalaha xafiisyada kaladuwan ee deegaanka. Madaxwaynaha ayaana hadalka siiyay xubnaha golaha si ay uga doodaan qodobadan islamarkaana la isula ansixiyo.
Kadibna guriga oo si qoto-dheer ufalanqeeyay ajandayaashan ayaa wuxuu isla qaatay oo codbuuxana ku ansixiyay in ladardargaliyo fulinta qorshayaasha sanadkan cusub ee 2009TI islamarkaana dabagal joogta ah lagu sameeyo nidaamka shaqo-galida shaqaalaha xafiisyada si looga midho-dhaliyo qorshaha koboca iyo isbadalka dhaqaalaha wareegiisa labaada. Kaas oo uu wadanku kaga baxayo saboolnimda islamarkaana kaga mid noqonayo wadamada uu dhaqaalahoodu dhexdhexaadka yahay.